cadnaan1's Content - Page 34 - Somali Forum - Somalia Online
Posts posted by cadnaan1
PM Saacid appeases his boss President Hassan Sh.
Ciidamada dawlada ee fadhigooda yahay magaalada marka maalmihi lasoo dhaafay ciidamo dheeraad ayaa loo diiraayey si ay duulaan ugu qaadaan xagaas iyo kismaayo markaas ayaa la arki doonaa canaasiirta halkaasi joogta ee amarki dawlada diiday waxay sameyn doonaan.
Jubba Conference Starts
Laakin hadii aysan dawladii wadanka maamulaysay aysan ka qeyb galin sida muuqatana aysan raali ka aheen..muxuu soo kordhinaa mamulka meeshaas kasoo baxa haduusan haysan aqoonsigii dowlada dhexe. Waa waqti lumis.
Waa lasoo furay
Sidiisaba furiinka wax fiican ma ahan marka erey ahaan in la qurxiyo ma wanaagsana.
Afsomaliga sidaa ayuu ku saxan yahay.
Fadlan naga daaya sawirada fake ah aad soo galinaysaa.wadada nololka ku xiranyihin wada noocaas oo kale xamar kuma tasking.
New conflict between qoslaaye and saacid
In uu qilaaf jiro shaki kuma jiro...laakin waxaa nasiib daro ah inaysan qarsan karin qilaafkooda wefdigii turkiga ee maanta laba shir jaraa'id oo kala gooni ah ayey kala qabteen sidoo kale wefdigi maraykana sidaa kala gooni ayey u qaabileen.
Sxb baahi ayaa i haysa baqti looma cuno,,inkasta oo dhaqaale xumo jirto hadana laysma liidiyo.maantana waxay ku fiicneed wadahadalka loo daayo wasaarada ku shaqada leh uu asaga atleast goob joog ka ahaado. Waa in sharciga la wada ilaaliya.
Madaxweynaha shalayto xildhibaan ayuu sidii madaxweyne oo kale usoo dhaweyey..maanta nin hay'ad ka socdo ayey asaga iyo raisal wasaaraha isla soo dhaweyeen.
Waxaana mudneed inay soo dhaweyso wasaarada arimaha bulshada , shaqadii oo dhan waxaa isku qaatay sedexda mas'ul ee sare.
Jowhar waxay iigu dambeysay 1992,, waagaas waxay aheed dhismaha jowhar mid aad u liito waxay u badnaayeen cariishyo dhoobo ka sameysan. Laakin hada waxaa ii muuqda horumar saaid ah.
Somalida dhibkas haysto wuxuu yahay ninba sida uu asaga taariikhda ka aaminsan yahay ayuu rabaa in lagu wada raaco, runtana la iska indha tiro.
oba hiloowlow;915053 wrote:
Sawirkan meesha maxaan waqti kusoo dabaashay,,,waa meesha ugu caansan jowhar.
Sawirkan wuxuu I xasuusiyey inaysan talo gacanta somalida ku jirin,,,anagana halkan ayaan qabiil ku murmaynaaa maalin walba.
Sawirkan waa meesha jowhar ugu caansan magaceeda ha la soo sheego.
Does the prime minister sleep on the job?
Lol amiin caamir markaan wajigiisa rasmiga ayuu lasoo baxay waa isku dire fitna uun ka shaqeeya.waxaad moodaa inuu ka xunyahay wada shaqeenta wanaagsan ee ka dhexeyso sedexda masuul ee ugu sareyso wadanka.wuxuu rabaa sidii kuwii hore ee isqabqabsiga badnaa.